Arduino - အခမဲ့ပစ္စည်းကိရိယာ အခမဲ့ hardware (စာမျက်နှာ 2)
TZXDuino - ZX Spectrum ဆော့ဖ်ဝဲအတွက်ကက်ဆက်တစ်ခုတွင် Arduino ဘုတ်တစ်ခု
TZXDuino သည် retro computing ကိုနှစ်သက်ပြီးနာမည်ကျော် Spectrum ZX ၏ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်
Arduino အတွက်ရေစုပ်စက် - မင်းသိထားသင့်သမျှ
သင်၏ Arduino ဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ်အဖွဲ့တွင်အရည်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်စဉ်းစားဖူးပါကရေစုပ်စက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိသင့်သည်
သင် CTC 101 ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိလျှင် Arduino နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပရိုဂရမ်နှင့်စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သင်သိထားသင့်သည့်အချက်များအားလုံးသည်ဒီမှာပါ
သင် Arduino Pro platform နှင့် Portenta H7 အကြောင်းသိထားသင့်သောအချက်များ၊ ကျွမ်းကျင်သောနယ်ပယ်အတွက်အားကောင်းသော platform နှစ်ခု
PCF8574 သည် DIY စီမံကိန်းများအတွက်လက်တွေ့ကျသောချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် I2C ဘတ်စ်ကား၏ I / O ချဲ့ထွင်သောကြောင့် Arduino ကိုဖြည့်စွက်သည်။
Arduino အတွက် Linear Actuator: သင်၏စီမံကိန်းများအတွက် mechatronics
Arduino နှင့်သင်၏ DIY စီမံကိန်းများတွင်ပေါင်းစပ်နိုင်သောအီလက်ထရောနစ် linear actuator အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော actuators များရှိသည်။
millis (): သင် Arduino function ကိုသိဖို့လိုအပ်သမျှ
Arduino ၏ millis () function သည်များစွာသောလူများအတွက်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့ကိစ္စရပ်များတွင်နှောင့်နှေးခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောအစားထိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမအကြောင်းအရာအားလုံးကိုသိထားပါ
Arduino Due: ဒီတရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်းအရာရာ
ဤသည်မှာဤဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ်၏တရားဝင်အရသာများဖြစ်သော Arduino Due ဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်းသင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးဖြစ်သည်
ADS1115: Arduino အတွက် analog-digital converter
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြသသောအစိတ်အပိုင်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ၎င်းသည် Analog မှဒစ်ဂျစ်တယ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သော Arduino အတွက် module တစ်ခုဖြစ်သည်။ ADS1115
MQTT - ပွင့်လင်းတဲ့ network protocol နဲ့ IoT မှာ ၄ င်းရဲ့အရေးပါမှု
ပွင့်လင်းသော protocol MQTT သည်အထူးသဖြင့် IoT (အရာများ၏အင်တာနက်) ကဲ့သို့သော application များအတွက်လတ်တလောတွင်အရေးပါလာသည်။
Arduino Leonardo: ဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်းသိထားသင့်သမျှ
Arduino Leonardo သည် Arduino စီမံကိန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့၏နောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျန်ညီအစ်ကိုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများရှိသည်
WS2812B: မှော် RGB LED ကြိုး
အကယ်စင်စစ်သင်သည်သင်၏ DIY စီမံကိန်းများအတွက်အရောင်တစ်ထိထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၎င်းအတွက်ထုတ်လုပ်သူများစွာသည်ကျော်ကြားသော LED strips များကိုအသုံးပြုသည်။
Nema 17: Arduino နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ stepper motor အားလုံး
သင်၏ Arduino ပရောဂျက်များနှင့်သင်သုံးနိုင်သည့် stepper motor များအကြောင်းအရာအားလုံးကိုလေ့လာပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်ခုရှိသေးသည်။
Arduino Nano: ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Arduino Nano သည်ကျော်ကြားသော Arduino ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်နောက် version တစ်ခုဖြစ်သည်။ သေးသည်
ULN2803: အားလုံး Darlington transistor စုံအကြောင်းပါ
ULN2803 DIP ချစ်ပ်သည်သင် Arduino ပရောဂျက်များနှင့်အတူသုံးနိုင်သည် Darlingon transistor တစ်စုံကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်ပေါင်းစပ်ထားသော circuit တစ်ခုဖြစ်သည်။
Lilypad: Arduino ဘုတ်ငယ်လေးအကြောင်းပါ
Arduino Lilypad သည်သေးငယ်သောစီမံကိန်းများသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်ရန်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ Arduino UNO ဒီဟာအရမ်းကြီးလွန်းတယ်
IMAX B6: သင်ပိုင်ဆိုင်ချင်သော Balancer charger
IMAX B6 သည်သင်၏ပရောဂျက်များကို Arduino နှင့်အခြား DIY တို့နှင့်ဖြစ်စေ၊ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်စေအနေဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သောလက်တွေ့ကျဆုံးချိန်ခွင်လျှာအားသွင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အိမ်လုပ် pinball - ဒီဖျော်ဖြေရေးစက်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ဤသည်မှာကိုယ်ပိုင် Arcade ဂိမ်းများရှိရန်ရိုးရှင်း။ စျေးပေါသည့်အရာများဖြင့်အိမ်လုပ် Pinball စက်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်
HC-SR501 - Arduino သဟဇာတဖြစ်သော IR Motion Sensor
HC-SR501 သည်သင်၏ပရောဂျက်များအား Proximity (သို့) Move ကို detect လုပ်နိုင်ရန် Arduino နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ IR motion sensor တစ်ခုဖြစ်သည်။
Joystick Arcade: သင်၏ retro စီမံကိန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်း Controller များ
စျေးကွက်တွင် Raspberry Pi နှင့် Arduino နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောသင်၏ retro video game ပရောဂျက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့် Arcade Joystick များစွာရှိသည်။
Arduino Mega: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကြီးအကြောင်း
တစ် ဦး ကအတန်ငယ်ပိုပြီးအစွမ်းထက်အခြားရွေးချယ်စရာ Arduino UNO ၎င်းသည်လူသိများသော Arduino Mega ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ အခြေခံအားဖြင့်သင်ရှာမရနိုင်သောအပိုစွမ်းရည်များရှိသည်
Arduino UNO- free hardware board scan ပါ
Arduino UNO ၎င်းသည်အခြေခံအကျဆုံးနှင့်အသုံးပြုသူအများစုအသုံးပြုသောတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အအောင်မြင်ဆုံးအခမဲ့ဘုတ်ပြားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
ဤနေရာတွင်သင့်တွင်သင်၏အီလက်ထရောနစ်စီမံကိန်းများအတွက်အလွန်လက်တွေ့ကျသောအရာ multiplexer နှင့် demultiplexer အကြောင်းသင်သိထားရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရှိသည်။
သင့်ရဲ့ Arduino နှင့်အတူဤအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူပိုပြီးနှင့်ပိုမိုစတင်ရန် thermistor နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရန်လိုအပ်သမျှ
Hall effect အာရုံခံကိရိယာ - သင်၏ Arduino စီမံကိန်းများအတွက်သင်သိထားသင့်သမျှ
Hall effect သည်ရူပဗေဒတွင်ထင်ရှားသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Arduino အတွက်အဆိုပါအာရုံခံကိရိယာများဖြစ်သောအသုံးချမှုများအတွက်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Arduino နှင့်ဤဘုတ်အတွက်ကင်မရာ module တစ်ခုဖြင့်သင်တုန့်ပြန်မှုအတုကို အသုံးပြု၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစီမံကိန်းများကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်။
Electromagnet: ဒီ element ကို Arduino board နဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲ
Electromagnet သည်အသုံးချခြင်းများစွာအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းကို Arduino နှင့်မည်သို့ပေါင်းစည်းနိုင်သည်ကိုသင်သိသင့်သည်
PWM: သင်၏ Arduino ဘုတ်ဖြင့် analog pin များအတုခိုးသည်
analog နှင့် digital သွင်းအားစုများ / output များအပြင်သင်၏ Arduino ဘုတ်တွင် analog system ကိုအတုယူရန်နာမည်ကြီး PWM များလည်းရှိသည်။
MOSFET: ဒီ transistor အမျိုးအစားကိုသိဖို့သင်လိုအပ်သမျှ
ဤတွင် MOSFET transistor နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားသင့်သမျှအရာများဒီမှာအရေးကြီးဆုံး solid state semiconductor devices များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အားလုံး Arduino I2C ဘတ်စ်ကားအကြောင်းကို
အရံပစ္စည်းတွေအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ connection system Arduino I2C bus အကြောင်းသင်သိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ entry အသစ်
Stepper မော်တာ: Arduino နှင့်ပေါင်းစည်း
MPU6050: Arduino နှင့်နေရာချခြင်းအတွက် module
သငျသညျရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်အရှိန်ကို detect သော DIY စီမံကိန်းကိုဖန်တီးချင်လျှင်, MPU6050 accelerometer နှင့် gyroscope နှင့်သင်၏ module တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
NodeMCU: ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် IoT ပလက်ဖောင်း
DIY စီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုသောဈေးအချိုဆုံး IoT ပလက်ဖောင်းအကြောင်း NodeMCU ။ Arduino နှင့်သုံးရန်အလွန်လက်တွေ့ကျပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် firmware
7 segment display နှင့် Arduino
7 segment display သည်သေးငယ်သည့် panel သို့မဟုတ် screen တစ်ခုဖြစ်ပြီး segments ၇ ခုပါ ၀ င်သောကြောင့် LEDs မှအက္ခရာများကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြရန်အတွက် LEDs များက illuminated နေကြသည်
TP4056: ဘက်ထရီအားသွင်းရန်အတွက် module
TP4056 ချစ်ပ်ပါ ၀ င်သည့် module သည်သင်၏ lithium ဘက်ထရီများကိုအီလက်ထရောနစ်စီမံကိန်းများသို့မဟုတ် Arduino တွင်အားသွင်းရန်လိုအပ်သည်။
DRV8825: stepper မော်တာများအတွက်မောင်းသူ
သင်၏ DIY ပရောဂျက်များ၌မော်တာများကိုမောင်းနှင်ရန်, သင်သည် Arduino အတွက် DRV8825 module ကို သုံး၍ stepper control ကိုခွင့်ပြုနိုင်သည်
Pushbutton: ဒီရိုးရှင်းတဲ့ element ကို Arduino နဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲ
push ခလုတ်သည်သင်ကြည့်ရှုပုံပေါ် မူတည်၍ Pulse ပို့ရန်သို့မဟုတ် signal ကိုကြားဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ရိုးရှင်းသော element တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းများပြုလုပ်ရန် Arduino နှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်
HC-SR04: အားလုံး ultrasonic အာရုံခံအကြောင်း
HC-SR04 သည် Ultrasound အခြေခံသည့်အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာဖြစ်သည်။ VL52L0X အတွက်ဈေးချိုသော်လည်းတိကျမှုနည်းသည်။ သို့သော်၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးသည်တူညီသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်
သင့်ရဲ့ Arduino အတွက် Anaconda (Python)
Anaconda သည် Python (နှင့် R) ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားကို လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းစွာဖြန့်ဝေသည်။ သတိရဆုံး၊
DHT22 - တိကျသောအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအာရုံခံမှု
ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်သင့်အားအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော DHT11 သို့ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Arduino နှင့် HC-SR04 ဖြင့်ကားရပ်နားသည့်အာရုံခံကိရိယာ
သင်၏ကားအတွက် DIY ယာဉ်ရပ်နားသည့်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးလိုပါက၎င်းသင်ခန်းစာနှင့်အလွယ်တကူနှင့်စျေးပေါစွာပြုလုပ်နိုင်သည်
Arduino Simulator: ဒီဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သမျှ
Arduino simulator ဟာဒီပရိုဂရမ်ကိုအမှန်တကယ်မလုပ်ပဲစမ်းသပ်နိုင်အောင်အမည်တပ်ပြီးဒီဘုတ်ကိုတုပတဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်တယ်။
သင်၏အပင်များ၊ ဥယျာဉ်ခြံသို့မဟုတ်ဥယျာဉ်များအတွက် Arduino ဖြင့်အလိုအလျောက်ရေလောင်းစနစ်
Arduino နှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးအလိုအလျောက်ရေလောင်းစနစ်။ တည်ဆောက်ရန်စျေးပေါပြီးရိုးရှင်းသောစနစ်, ဒါပေမယ့်ပြီးပြည့်စုံသောနှင့်ထိရောက်သော
VL53L0X သည်သင်၏ပရောဂျက်များနှင့် Arduino နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည့်တိကျသောလေဆာဖြင့်အကွာအဝေးများကိုတိုင်းတာရန် optical sensor ဖြစ်သည်။
SONOFF - ကိရိယာများကိုပိတ်ရန်သို့မဟုတ်ဖွင့်ရန်အဝေးထိန်းခလုတ်တစ်ခု
တစ်ခုခုကိုအဝေးမှဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါသလား။ အပူကိုသင်ဖွင့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါကသင်ထားရှိပါကပိတ်နိုင်သည်။
NRF24L01: Arduino အတွက်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက် module
Arduino ဘုတ်အတွက် NRF24L01 ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး module အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ။ သင့်ရဲ့စီမံကိန်းများအတွက် RF ဆက်သွယ်မှုကိုထည့်ပါ
L298N: Arduino အတွက်မော်တာများကိုထိန်းချုပ်ရန် module
l298n module သည် DC motor driver သို့မဟုတ် controller ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မော်တာများသို့မဟုတ်စက်ရုပ်များဖြင့်စီမံကိန်းများကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်များစွာအသုံးပြုသည်
FPGA ချစ်ပ်တစ်ခုသည်ပရိုဂရမ်မာစက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၄ င်း၏အတွင်းပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာ၊ CPU မှမှတ်ဉာဏ်၊ ထိန်းချုပ်မှုသို့စသည်တို့ဖန်တီးနိုင်သည်။
ESP8266: Arduino အတွက် WIFI module
ESP8266 Wifi module၊ pinout၊ Arduino ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အချက်အလက်စာရင်း၊ nodeMCU ပရိုဂရမ်းမင်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Arduino + relay module နှင့် rock & roll: AC / DC ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း
AC Arduino board နှင့် relay module ပါသော AC ကိရိယာတစ်ခုကိုသင်ထိန်းချုပ်လိုပါသလား။ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘယ်လိုပြမလဲ
Arduino programming သင်ခန်းစာ
Arduino IDE နှင့် Ardublock ကို သုံး၍ Arduino ပရိုဂရမ်းမင်းလမ်းညွှန်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းပါသည်။ ခြစ်ရာကနေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကုဒ်နမူနာများဖြင့်
ဓါတ်ရောင်ခြည်တိုင်းတာရန်အိမ်လုပ် Geiger ကောင်တာကိုတစ်ဆင့်မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါသည်။ Arduino နှင့် Raspberry Pi သုံး၍ ရိုးရှင်းသော DIY အလုပ်
Thor သို့မဟုတ် Mjolnir ၏တူကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း
သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ထားသော Thor သံတူကို DIY Arduino ဆားကစ်တစ်ခုနှင့်၎င်းကို electromagnetism ပေးနိုင်ရန်သင်မည်သို့ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။
Arduino နဲ့အတူစက်ဘီးပေါ်မှာဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်၊ ကီလိုမီတာတွေကိုဘယ်လိုတွက်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးပါတယ်။
a ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စာသားများကို Morse ကုဒ်သို့ဘာသာပြန်ဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လျှောက်လွှာတစ်ခုမည်သို့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုဆွေးနွေးမည့်နေရာ Arduino UNO.
LCD ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့် Arduino တို့သည်စီမံကိန်းတည်ဆောက်သူများအကြားအလွန်ရေပန်းစားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒါကဒီအစိတ်အပိုင်းများ၏စျေးနှုန်းနိမ့်မှုကြောင့် ...
RGB Led နှင့် Arduino နှင့်အတူစီမံကိန်း 3
RGB LEDs သို့မဟုတ်ရောင်စုံမီးများသည်အလွန်လူကြိုက်များလာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပေါ် အခြေခံ၍ စီမံကိန်းများစွာကိုဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်သည်။
Arduino အတွက်အာရုံခံကိရိယာများ၊ အတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခု
Arduino ဘုတ်ဒါမှမဟုတ်အသုံးအဆောင်တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပါ။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသုံးစွဲသူများစွာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမေးသောမေးခွန်း။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Arduino အတွက်အာရုံခံကိရိယာတွေအကြောင်းပြောပြတယ် ...
Arduino အတွက်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာအတွက်လမ်းညွှန်အသေးစား၊ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်မည်သည့်နမူနာများနှင့်မည်သည့်အာရုံခံကိရိယာများကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ Arduino ဘုတ်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
Arduino + ဘလူးတုသ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဂျက်များတွင် Arduino Bluetooth ကိုအသုံးပြုလိုပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများတွင်ကြိုးမဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုသောမည်သည့်ရွေးချယ်စရာများရှိပါသလဲ။
Arduino အတွက် Scratch, အသစ်စက်စက် Arduino သုံးစွဲသူများအတွက် IDE တစ်ခု
Scratch for Arduino သည် Arduino ဘုတ်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောပရိုဂရမ်များဖန်တီးရန်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲရန်ရည်ရွယ်သောအလွန်လူကြိုက်များသည့်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ Scratch for Arduino ဆိုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပရိုဂရမ်တွေကိုအလွယ်တကူ install လုပ်ပြီးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံနည်းနည်းနဲ့စက်ရုပ်လက်မောင်းတစ်လုံးဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ Arduino ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့အမြဲတမ်းစက်ရုပ်လက်တစ်လုံးဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာဖို့အကူအညီအဖြစ်နည်းပြသင်ခန်းစာလေးပါ။
Visual Programming သည်လူကြိုက်များလာသည်။ ဤအမျိုးအစားကို Arduino တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Ardublock tool သည်အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Arduino microcontroller ကိုအခြေခံပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့လိမ်ရှာဖွေစက်အဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအသေးစိတ်မြင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
အရာဝတ္ထုများ၏အင်တာနက်ကိုလွတ်လပ်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ဘုတ်အဖွဲ့ Arduino Yun
Arduino Yún၊ Arduino စီမံကိန်းမှဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအရာဝတ္ထုများ၏အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
Arduino ဆိုတာဘာလဲနှင့် Arduino စီမံကိန်းအကြောင်း။ Arduino ဘုတ်များတည်ရှိပြီးသောမော်ဒယ်များအတွက်လမ်းညွှန်အသေးစား၊ Arduino နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်နိုင်သောစီမံကိန်းများနှင့် Arduino နှင့် Raspberry Pi တို့အကြားမည်သည့်ကွာခြားချက်များရှိသည်။
Arduino ဖြင့်စတင်ခြင်း - မည်သည့်ဘုတ်များနှင့်ပစ္စည်းများသည်စတင်ရန် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နိုင်သနည်း
Arduino လောကတွင်စတင်ရန်စျေးကွက်ရှိကွဲပြားသောရွေးချယ်မှုများအကြောင်းပြောမည့်နေရာ၊ တရားဝင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောဘုတ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပစ္စည်းများအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်။
ကဒ်ရောင်းသူကိုတံဆိပ်ဖြင့်ဖန်တီးပါ Arduino UNO နှင့်ကတ်ထူပြား
ကတ်ထူပြားသည်ဖက်ရှင်ပစ္စည်းဖြစ်လာသည်။ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်သည်အီလက်ထရွန်နစ်အက္ခရာစာလုံးကို Free Hardware ပါ ၀ င်သောပစ္စည်းတစ်ခုအားပြန်လည်အသုံးပြုထားသောကတ်ထူပြားမှတည်ဆောက်ထားသော ...
LattePanda မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ, ကစားအများကြီးပေးနိုငျသောဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ်အဖွဲ့
LattePanda Delta သည်သင်အားကောင်းသော်လည်းအပြည့်အ ၀ Arduino နှင့်အဆင်ပြေသောစီမံကိန်းတစ်ခုတည်ဆောက်လိုပါကသင်လိုအပ်သည့် Controller ဖြစ်သည်။
ASPIR သည်အခက်အခဲမရှိဘဲမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သော android စက်ရုပ်ကိုလေ့လာရန်နှင့်ကူညီရန်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
Arduino Smart Home Challenge၊ စမတ်အိမ်ကိုဖန်တီးရန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု
developer များအနေဖြင့် Arduino board နှင့် Alexa assistant ကိုအသုံးပြုသော gadget (သို့) နည်းပညာကိုတီထွင်ရန်လိုအပ်သည်။
သူတို့က Star Wars မှစက်ရုပ် R4-P17 ၏ပုံတူကိုဖန်တီးသည်
Alejandro Clavijo သည် Star Wars Saga ကိုပိုင်ဆိုင်သော Lucasfilm မှအတည်ပြုသော R4-P17 ပုံတူကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
ကျောင်းသားများသည်လျှပ်စစ်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်များထုတ်လုပ်ရန် Arduino နှင့်အတူကိရိယာတစ်ခုဖန်တီးသည်
ကျောင်းသားအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူကိရိယာအစုံတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည် Arduino UNO ဒါကမင်းကိုလျှပ်စစ်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်တွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖန်တီးနိုင်အောင်လုပ်ပေးတယ်။
Arduino သည် ARM နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့သည်
Arduino စီမံကိန်းနောက်ကွယ်မှကုမ္ပဏီသည် ARM ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း၍ အသစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်များအတွက်လက်တွဲသည်။
သူတို့ကပန်းကန်တစ်ခုနှင့်အတူစစ်တုရင်ဖန်တီးပါ Arduino UNO
RoboAvatar အသုံးပြုသူသည်အပိုင်းများကိုအလိုအလျောက်ရွေ့လျားစေပြီးပန်းကန်တစ်ခုသာလိုအပ်သည့်စစ်တုရင်စက်ကိုဖန်တီးခဲ့သည် Arduino UNO...
Arduino အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ SmartLamp တစ်ခုဖန်တီးပါ
သူတို့ကပန်းကန်တစ်ခုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Arduino UNO ပြီးတော့အိမ်သုံး (သို့) ရုံးစားပွဲခုံအတွက်အံ့သြစရာကောင်းပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ 3D ပရင်တာတစ်ခုပါ။
Arduino MKR WAN 1300 နှင့် Arduino MKR GSM 1400၊ Arduino စီမံကိန်းမှ IoT အတွက်ဘုတ်အသစ်များ
IoT အတွက် Arduino စီမံကိန်းမှဘုတ်အဖွဲ့အသစ်နှစ်ခုအားနယူးယောက်ရှိနောက်ဆုံးပြုလုပ်သောပြပွဲတွင်ပြသခဲ့သည်။ ဤဘုတ်များကို MKR WAN 1300 နှင့် MKr GSM 1400 ဟုခေါ်သည်
လူငယ်သုံး ဦး သည်အတားအဆီးများနှင့်ရေအိုင်များကိုရှာဖွေနိုင်သည့်မျက်မမြင်များအတွက်သူတို့၏ကြံကိုပြသကြသည်
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှတ်မိစေရန် Desktop ကို Arduino ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ
Arduino ဘုတ်အဖွဲ့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ David Levin သည်သင်အတွေ့ရှိတိုင်းပြည်များမှအသံများကိုသင့်အားသတိပေးသည့်အပြည့်အဝအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောပရိဘောဂအပိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
သင့် ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်အဝေးထိန်းတစ်ခုဖန်တီးပါ
အချို့အသုံးပြုသူများသည် ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီးအဝေးထိန်းစနစ်ကို IR signal များအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသည့်အဝေးထိန်းခလုတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။
Arduino နဲ့ကိုယ်ပိုင် MIDI Controller လုပ်ပါ
မည်သူမဆို Arduino ကဒ်ဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်လုပ် MIDI Controller ပြုလုပ်နိုင်ရန်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာပေးသည့်နေရာ
အသက် ၁၄ နှစ်သာရှိသေးသည့်TomásRodríguezသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအဏ္ဏဝါရှာဖွေရေးစီမံကိန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Titan Clock သည် Arduino နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
Titan Clock နာရီသည်မည်သည့်အခန်းတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သောမီးအလင်းရောင်ပါ ၀ င်သည့်နံရံကပ်နာရီဖြစ်ပြီးလိုအပ်သောအချိန်ကိုသိရှိရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
LED cube ပြုလုပ်ချင်တာလား ဤစီမံကိန်းများကို Arduino နှင့် Raspberry Pi တို့ဖြင့်အထူးဂရုပြုပြီး၎င်းသည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော LED Cube ကိုထွန်းလင်းပေးသည်။ မင်းလုပ်လား
ExoArm သည် Free Hardware Project တစ်ခုဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောခွန်အားမရှိသောလူများအားကူညီရန်လက်မောင်းဟောင်းကိုဖန်တီးသည်။
Free Hardware ဖြင့်သင်၏အိမ်အတွက်အပန်းဖြေဘတ်စကတ်ဘောစက်တစ်ခုဖန်တီးပါ
Cory Guynn အမည်ရှိအသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်သူ၏အိမ်အတွက် Arcade Basketball Machine တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Arduino Nano ဘုတ်တပ်ထားသောစက်တစ်လုံး ...
ဟုတ်တယ်၊ Arduino နဲ့သယ်ဆောင်ရလွယ်တဲ့ metal detector ကိုလည်းသင်တည်ဆောက်နိုင်တယ်
အသုံးပြုသူ TechKiwiGadgets သည်သိသာထင်ရှားသည့်သယ်ဆောင်နိုင်သောသတ္တုရှာဖွေစက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်ကွိုင်များနှင့် Arduino Mega ဘုတ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Uware, အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်စျေးပေါ Google Glass
UWare သည် Google Glass ကဲ့သို့အိမ်တွင်း virtual reality မျက်မှန်များဖြစ်သော်လည်း Arduino Nano board ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးစမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။
Arduino AG, Arduino အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီကို BCMI ကိုရောင်းလိုက်ပြီ
BCMI ကုမ္ပဏီသည် Arduino AG ကုမ္ပဏီ၊ Arduino ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးပါ ၀ င်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ၀ ယ်ယူလိုက်ပြီးပျောက်ကွယ်မသွားနိုင်သောအနာဂတ်တွင် Arduino AG သည်အနာဂတ်ရှိသည်။
Intel သည် Arduino 101 Curie ကိုစွန့်လွှတ်သည်
Intel သည် IoT နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စီမံကိန်းများကိုဆက်လက်စွန့်လွှတ်သည်။ Arduino 101 Curie ဘုတ်အဖွဲ့ကို Pentium ကုမ္ပဏီမှလည်းဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
သင်၏ Operation ဂိမ်းကို Arduino ဘုတ်ဖြင့်ဖန်တီးပါ
TrevorB23 အမည်ရှိအသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် Arduino Nano ဘုတ်နှင့် Lego အပိုင်းများဖြင့်စစ်ဆင်ရေးဂိမ်း၏ပုံတူကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည် ...
Arduino Create သည်ပညာရေးကမ္ဘာအတွက် Chrome OS သို့လာသည်
Arduino Create, ကျော်ကြားတဲ့ suite Arduino ကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာပြီးသင်ယူဖို့အတွက်၊ ကမ္ဘာကြီးကိုရောက်ရှိဖို့အတွက် Chrome OS ကိုနောက်ဆုံးမှာရောက်ရှိခဲ့သည်။
Konstantin Schauwecker အမည်ရှိအသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် Arduino မှကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်လက်နှိပ်စက်ဟောင်းကိုကြိုးမဲ့ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်။
Sony သည်ထိုကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
Arducky ဘာလို့လဲဆိုတော့ Arduino နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကမကောင်းဘူး
Arducky သည်ဘုတ်အဖွဲ့သုံးသောစီမံကိန်းဖြစ်သည် Arduino UNO မကောင်းသောကုဒ်များကို run ရန်၊ ကွန်ယက်ကိုပိုမိုအားနည်းလာစေရန်ကူညီပေးသောကုဒ်များ ...
Fidget စက်ရုပ်၊ Fidget Spinner ကစားသောစက်ရုပ်
ထုတ်လုပ်သူ Bartnik သည် Fidget Spinner ကိုကစားမည့်စက်ရုပ်တစ်လုံးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
Arduino နှင့်ဤ Super Claw တို့၏ကျေးဇူးကြောင့်သင်၏ပြည့်ကျပ်နေသောတိရစ္ဆာန်ကိုဖမ်းပါ
ရိုင်ယန်ဘိတ်စ်၏တီထွင်မှုကို အခြေခံ၍ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ဤထူးခြားသောစီမံကိန်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချိတ် (သို့) SuperClaw စက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
သင်၏ CRT မော်နီတာအဟောင်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပါ Arduino UNO
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် CRT မော်နီတာအဟောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ Motorola အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေကိုပန်းကန်တစ်ခုနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ် Arduino UNOပိုလွတ်လပ်အီလက်ထရွန်းနစ်
Arduino ဘုတ်နှင့် Pokemon ကဒ်များဖြင့် Alien Gate တစ်ခုဖန်တီးပါ
သင်၏ကီးဘုတ်ဟောင်းကို Arduino Mini Pro ဘုတ်ဖြင့်အဆင့်မြှင့်ပါ
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် Arduino Mini Pro ကို အသုံးပြု၍ keyboard အဟောင်းသို့ scroll ခလုတ်ကိုထည့်သွင်းရန်အသုံးပြုသည်။
လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာနှင့် Arduino ပါသောကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့်ပါ
Arduino Mini Pro သည်လက်ဗွေဆင်ဆာနှင့်အလုပ်လုပ်သောသော့ခလောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်သော smart lock တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်၏ Lady Potts ကို Arduino ဘုတ်ဖြင့်ဖန်တီးပါ
ငယ်ရွယ်သောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး သည် Zowi နှင့် Arduino ပျဉ်ပြားများအသုံးပြုသည့် bipedal စက်ရုပ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်မစ္စစ်ပို့တ်ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။
Arduino ဘုတ်နှင့် 3D Printer ဖြင့်အိမ်လုပ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုတည်ဆောက်ပါ
Nikodem Bartnik လူငယ်သည်သူ၏ ၀ က်ဘ်ထုတ်ဝေမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်သည့် Arduino နှင့်အတူအိမ်လုပ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။
ရိုးရှင်းသောပရိုဂရမ်းမင်းဗဟုသုတဖြင့် Arduino Controller နှင့်ဇွဲနပဲကြီးစွာဖြင့် ... လူငယ်တစ် ဦး ထံမှလူငယ်တစ် ဦး ကိုသင်ယူလိုသောဆန္ဒရှိသည်။
MKRFOX1200, IoT အတွက် Arduino တစ်ခု
MKRFOX1200 သည် Arduino စီမံကိန်းမှဘုတ်အဖွဲ့အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး IoT ၏ကမ္ဘာကြီးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ထင်ရှားသည်။
ArduECU, Arduino ကားနဲ့နီးလာပြီ
ArduECU သည်နာမည်ကျော်ဘုတ်နှင့် Free Hardware များကိုကားနှင့်မော်တော်ယာဉ်များကိုကမ္ဘာသို့ပို့ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုမည့်ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသော Arduino ဖြစ်သည်။
MAKERbuino၊ ငါတို့ကိုယ်ပိုင် retro ဂိမ်း console တည်ဆောက်ရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း
MAKERbuino သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော Kickstarter စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့် Arduino မှတစ်ဆင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် portable console ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ငါတို့ဥယျာဉ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ Arduino နှင့်အတူ3စီမံကိန်းများကို
Arduino ပျဉ်ပြားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောဥယျာဉ်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးလောကတွင်အဓိကထားသောအခမဲ့စီမံကိန်း (၃) ခုကိုတင်ပြသည်။
ပန်းကန်တစ်ခု၏ဘေးပတ်လည်ရှိ 360 ကင်မရာ Arduino UNO နှင့်ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာသည်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆိုတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ဓာတ်ပုံများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
Gesture Keyboard သည်ကွန်ပျူတာနှင့်အမူအရာပြုလုပ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်
Gesture Keyboard သည် Arduino Pro ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်ကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး gestures မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားစာသားများရေးသားရန်သို့မဟုတ် application များကို run ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
Pixel 2, အခမဲ့စီမံကိန်းများအတွက်အခမဲ့မျက်နှာပြင်
Pixel2သည်ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၁.၅ လက်မ LCD မျက်နှာပြင် Arduino နှင့်တည်ဆောက်ထားသည့်စမတ်ဖန်သားပြင်ဖြစ်သည်။
Goblin 2, IoT စီမံကိန်းများအတွက်ဘုတ်အဖွဲ့
Goblin2သည် Arduino မှုတ်သွင်းထားသောဘုတ်အသစ်ဖြစ်ပြီး IoT ကမ္ဘာကြီးသို့ ဦး တည်သည်။ Goblin2သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။
သင် Macbook TouchBar ကိုလိုချင်လျှင် Arduino နှင့် Remote Control ဖြင့်၎င်းကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် macbook နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး Arduino Nano နှင့်အလုပ်လုပ်သောအဝေးထိန်းခလုတ်အားဖြင့် Macbar Touchbar အစားအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်သည်။
သူတို့က 3D Printer တစ်ခုကိုကော်ဖီထုတ်လုပ်သူဟောင်းနှင့် Arduino ဘုတ်များဖြင့်ဖန်တီးသည်
Tropical Labs မှပရင်တာတွင်အသုံးပြုသောအီလက်ထရွန်နစ်များကြောင့်ကော်ဖီပြုလုပ်သူအဟောင်းတစ်လုံးအား 3D ပရင်တာတစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့သည်
ဒီ Renault ကုလားထိုင်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Renault အာဂျင်တီးနားကငါတို့နိုးတဲ့ညတွေမှာအိပ်မက်ထဲကနေအိမ်မှာအိပ်ဖို့ကလေးကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုပေးတယ်။
uArm Swift၊ လုံးဝအခမဲ့စက်ရုပ်လက်မောင်း
uArm Swift သည်စက်ရုပ်လက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ Free Hardware ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည့်စက်ရုပ်လက်ထောက် ...
ယခုသင်သည်သင်၏ကီးဘုတ်အသစ်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအသစ်ကိုသင်၏ဟောင်းသော Commodore 64 ဖြင့်သုံးနိုင်သည်
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်သူ၏ဂိမ်းစက် console အဟောင်းနှင့်အတူလက်တော့ပ်ကီးဘုတ်အသစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်သူ၏ Arduino Mega ဘုတ်ကို Commodore 64 နှင့်အတူတကွအသုံးပြုခဲ့သည်။
Arduino Mega သည်စက်ရုပ်တည်ဆောက်ရန်စံပြဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်သည်
Arduino Mega သည်ဈေးကြီးသော Arduino စီမံကိန်း၏ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်သော်လည်းစက်ရုပ်၊ 3D Printing နှင့်သက်ဆိုင်သောစီမံကိန်းများအတွက်ပိုမိုသင့်တော်ကြောင်းပြသနေသည်။
နည်းပညာအသစ်များကိုနှစ်သက်သူသည် Arduino ဘုတ်နှင့်ရိုးရှင်းသောရေဒီယိုအဟောင်းတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ကိုယ်ပိုင်ရေဒီယိုကိုအသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများပြန်လည်အသုံးပြုသည်။
သင်၏ Bluetooth Speaker ကို Arduino ဘုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်အိမ်လုပ် bluetooth စပီကာကိုပုံမှန်စပီကာများနှင့် Arduino Mini board ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးအသုံးပြုသူများနှင့်နေရာများစွာအတွက်လက်တွေ့ကျသည်။
Arduino IDE မူကွဲအသစ်၊ လူတိုင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်မူကွဲတစ်ခု
ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီက Arduino IDE ဗားရှင်းအသစ်ရရှိခဲ့ပြီး Arduino.cc စီမံကိန်းနှင့် Arduino.org ၏ပျဉ်ပြားအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သောမူကွဲတစ်ခုရရှိထားသည်။
Alexa Ruspin သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူနိုင်သောဝက်ဝံရုပ်ဖြစ်သည်
Alexa Ruspin သည်ဝက်ဝံရုပ်ဖြစ်ပြီးဝက်ဝံရုပ်သည် Alexa, Arduino နှင့် Raspberry Pi ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုစမတ်ကျစေရန်နှင့်ကလေးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်စေရန်ပြုလုပ်သည်။
MKRZero, ပညာရေးစီမံကိန်းများအတွက် Arduino ဘုတ်အဖွဲ့အသစ်
MKRZero သည်အခြားအခမဲ့ဘုတ်များနှင့်အားကောင်းသောပညာရေးဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုပေးစွမ်းရန် 32-bit ဗိသုကာကိုအသုံးပြုသည့်အသစ်စက်စက် Arduino ဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Peeqo သည်လုံးဝအခမဲ့သောစက်ရုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂူဂဲလ် API နှင့်တည်ဆောက်ထားပြီးတုံ့ပြန်မှုများကို gif၊ ပျော်စရာကောင်းပြီးမူရင်းပုံစံထုတ်သည်။
Arduino Segway, လုံးဝအခမဲ့နှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့မော်တော်ယာဉ်
Arduino Segway သည်အများအားဖြင့်လမ်းများပေါ်တွင်တွေ့ရသောမူလ Segway နှင့်မတူသော်လည်းအကန့်အသတ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအိမ်လုပ် segway ကိုပြန်လည်ဖန်တီးပေးသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။
ဖုန်းအသစ်တစ်ခုကို Arduino နှင့်တေးဂီတသေတ္တာထဲသို့ပြောင်းပါ
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်ဖုန်းအဟောင်းမှဖုန်းအဟောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမယ့်ဈေးမကြီးတဲ့ဒီကိရိယာကိုဂီတသုံးခြင်း။
Autodesk မှငှားရမ်း Arduino ပူးတွဲတည်ထောင်သူ
Arduino ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ David A. Mellis သည်သူ၏အီလင်းအီလက်ထရောနစ်စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် Autodesk မှငှားရမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ကားကိုတည်ဆောက်ရန် PolySync ကိရိယာအစုံတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်
Neil Maree သည်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဖြစ်ပြီး Arduino Due ဘုတ်နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောကင်ကိုဖန်တီးသည့်ကော်ဖီဖျော်စက်ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့သည် ...
Nokia 1100 အဟောင်းကိုစမတ်နာရီအဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ
ရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကို Nokia 1100 ဖုန်းအဟောင်းတစ်လုံးကိုစမတ်နာရီအဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာတစ်ဆင့်ချင်းစီပြသပေးပါတယ်။
သူတို့က Pringles သေတ္တာတချို့ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စည်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်
တခါတရံလှုံ့ဆော်မှုတိုက်သည့်အခါတူရိယာကိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။ Pringles ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဒီဂျစ်တယ်စည်နှင့်အတူပြproblemနာသည်ပြေလည်သွားသည်။
Dtto, Free Hardware နှင့်အတူပထမဆုံး modular စက်ရုပ်များထဲမှ
Dtto သည် Free Hardware ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်စက်ရုပ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် modular ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောမည်သည့်ပုံသဏ္createာန်ကိုမဆိုဖန်တီးရန်၎င်း၏ modules များကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Cubetto သည်အခမဲ့ပစ္စည်းများကိုကစားစရာများဖန်တီးရန်နှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းသင်ကြားရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သောအကောင်းဆုံးဥပမာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သည်။
PcDuino သည် Arduino မပါဘဲတည်ရှိနိုင်ပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကို PcDuino4လို့ခေါ်တယ်
PCDuino တွင် PcDuino4ဟုသိကြသော SBC ဘုတ်အဖွဲ့အသစ်ရှိပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းဘုတ်အဖွဲ့သည် Raspberry Pi အတွက်လဲလှယ်ပေးသည့်အနေဖြင့် Arduino ကိုအထောက်အပံ့မပေးပါ။
Square Off, လူတိုင်းလိုချင်ကြသောအခမဲ့ဖြစ်သည်
Square Off သည်စက်နှင့်လွတ်လပ်သောစစ်တုရင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စက်ကိုမိုဘိုင်းအက်ပ ...
သင်သည်သင်၏ Arduino ဘုတ်ကိုဤစက်ရုပ်ငါးဖြင့်နစ်မြုပ်နိုင်သည်
အဲရစ် Dirgahayu သည် Arduino Pro Mini, Arduino mini board နှင့်အတူတည်ဆောက်ထားသည့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သောစက်ရုပ်ငါးကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။
ရိုးရိုး Arduino ဘုတ်ဖြင့်ဆူညံသံတိုင်းကိုဖန်တီးပါ
ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ကဆူညံသံတိုင်းကိုရိုးရှင်းတဲ့ပန်းကန်ပြားတစ်ခုနဲ့ဖန်တီးခဲ့တယ် Arduino UNO Neopixel ဦး ဆောင်သည့်အစင်းကြောင်းနှင့်စီမံကိန်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဒီ Arduino စီမံကိန်းနှင့်အတူ roomba ဖန်တီးပါ
ခ Aswinth Raj ပန်းကန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် Arduino UNO အိမ်၏ကြမ်းပြင်ကိုဖုန်စုပ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်သောကောင်းမွန်သောအိမ်လုပ် Roomba တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
Pixie သည်ဥာဏ်ရည်ရှိရန်စွမ်းရည်ရှိသောအီလက်ထရွန်နစ်စမတ်နာရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် geek အသုံးပြုသူများအတွက်အဓိကဆွဲဆောင်မှုမဟုတ်ပါ။
Samsung Galaxy Note7ကိုဒီ Arduino စီမံကိန်းနဲ့ဖြေရှင်းပါ
အတူရိုးရှင်းတဲ့စီမံကိန်းကို Arduino UNO Samsung Galaxy Note7သည်ပြproblemsနာများရပ်တန့်စေနိုင်သည်။
သင်၏ Apple II ကို Arduino ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး SD ကဒ်အထိုင်ထည့်ပါ
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် Apple II ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပစ္စည်းများကိုချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်းကြောင့် Apple II တွင်အလုပ်လုပ်သော sd ကဒ်များအတွက် slot တစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။
သင်၏ဟောင်းသော Arduino ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်ကိုပြန်သုံး။ ၎င်းတို့ကိုကြိုးမဲ့ဖြစ်စေပါ
ကြိုးဟောင်းကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်ကိုခေတ်မီသောပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Arduino board နှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။
သူတို့ကစမတ်အမှိုက်ပုံးကို Arduino Nano နဲ့ဖန်တီးတယ်
Floppotron သည်ယခုခေတ်ပိုကီမွန်သီချင်းကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်ကွန်ပျူတာအဟောင်းများမှအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖန်တီးထားသော geeky သံစုံတီးဝိုင်းဖြစ်သည်။
မိုးလုံလေလုံအပင်များအတွက် Sunbot နှင့် Shadebot, Arduino
Sunbot နှင့် Shadebot တို့သည် Arduino တွင်တည်ဆောက်ထားသောစက်ရုပ်နှစ်မျိုးဖြစ်ပြီးနေရောင်ခြည်နှင့်စိုထိုင်းဆလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ အပင်များကိုရွေ့လျားစေနိုင်သည်။
Game Boy အဟောင်းနှင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားထိန်းချုပ်ပါ
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် Game Boy အဟောင်း၌၎င်းကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက်ဝေးလံခေါင်သီသောထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အသက်တာသစ်ကိုအသက်ဝင်စေနိုင်သည်။
သူတို့က Arduino ဘုတ်ဖြင့်အိမ်လုပ်မုသာရှာဖွေစက်ကိုဖန်တီးသည်
Arduino နဲ့အတူဒီမုသားရှာဖွေစက်အပါအဝင်ပရောဂျက်များစွာကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီသူငယ်ချင်းတွေကငါတို့သူငယ်ချင်းတွေကိုလိမ်တာလားဆိုတာမသိရဘူး ...
Hardwino သို့မဟုတ် Arduino ဘုတ်ဖြင့်ကော့တေးပြုလုပ်နည်း
HardWino သည် Arduino Mega ဘုတ်ကို သုံး၍ ဖျော်ဖြေမှုများပြုလုပ်နိုင်ပြီးဖျော်ဖြေနိုင်သည့်ဖျော်ယမကာစပ်သူများအားလှုပ်ခါရန်ကြိုးစားသည့်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
Arduino Pokéball, ပိုကီမွန်အားလုံးကိုဖမ်းယူဖို့ကိရိယာတစ်ခု
Arduino ချစ်သူများသည် Arduino Pokeball ဟုခေါ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ကြပြီး၎င်းသည်တောရိုင်းပိုကုန်းမွန်ကိုအမဲလိုက်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုအဖြစ်ပြသထားသည် ...
သင်၏ SNES အရာတစ်ခုကို Arduino MEGA ဖြင့် rom format သို့ပြောင်းပါ
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် SuperNintendo နှင့် Nintendo 64 ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၏ roms ကော်ပီများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည့် cartridge adapter တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။
Nintendo NES မိတ္တူတစ်ခုသည် Raspberry Pi နှင့် Arduino ကိုအသုံးပြုသည်
Nintendo NES ၏နောက်ဆုံးထုတ်ကော်ပီသည် Raspberry Pi နှင့် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းသာမကအခြားအရာတစ်ခုအတွက် Arduino ဘုတ်နှင့် NFC တံဆိပ်များကိုပါအသုံးပြုသည်။
Omega2 သည် Arduino နှင့် Raspberry Pi တို့အတွက်စျေးသိပ်မကြီးသောပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်
Omega2 သည် Kickstarter မှတစ်ဆင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာရန်ရန်ပုံငွေရှာဖွေနေသောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဟာကို ၅ ယူနစ်အောက်မရနိုင်ပါ။
သူတို့ကတစ် ဦး နှင့်အတူစကားလုံးတစ်လုံး personalize Arduino UNO နှင့်သစ်သား
အသုံးပြုသူ Grahamvinyl သည်သူ့ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးနာရီကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ သစ်သားအိတ်များနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲတွင်ပရိုဂရမ်းမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရှိသောနာရီ
LattePanda, ၀ င်းဒိုး ၁၀ နှင့်အိတ်ဆောင်ပီစီနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိသည်
LattePanda ၏အမည်အောက်တွင် Windows 10 ပါ ၀ င်သည့် PC တစ်ခုကိုသင်လက်ထဲထည့်နိုင်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏စွမ်းအားကြောင့်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းနိုင်သည်။
3D ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် Arduino ကိုအသုံးပြုထားသောစပ်စုသောသေတ္တာသည်၎င်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပဟေboxိ box တစ်ခုသည် web ၏လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့် Arduino ဘုတ်နှင့် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းပေါင်းစပ်မှုတို့အတွက်လုံး ၀ လွတ်သွားသည်။
Venduino, Arduino နှင့်အတူတည်ဆောက်အရောင်းစက်
Venduino သည်ထုတ်လုပ်သည့်အရောင်းစက်ဖြစ်သည် Arduino UNO အလွန်ကြီးမားသောအရောင်းစက်ဖြစ်နိုင်သည့်သေးငယ်သောစက်ပစ္စည်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပစ္စည်းများ ...
Arduino ဘုတ်ဖြင့်ကား Simulator ကိုဖန်တီးပါ
Arduino ဘုတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည်များပြားလှပြီးလူငယ်ဖန်တီးသူနှစ် ဦး သည်ကစားစရာနှင့် Arduino ဘုတ်များပါသောကား Simulator ကိုဖန်တီးလိုက်သည်။
သူတို့ဟာ Arduino 101 ကျေးဇူးကြောင့်ဆလတ်ကြီးထွားလာသည်
Arduino အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် Hydroponics အသုံးပြု၍ ဆလတ်ကြီးထွားရန်စနစ်တစ်ခုနှင့် Arduino 101 board ကို၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Arduino Otto သည် Amazon Echo ၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်
Arduino Otto သည်မကြာမီတင်ပြမည့်ဒုတိယဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး Amazon Echo API ကိုထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်သည်။
အသစ် Arduino Primo တွင်ဆက်သွယ်မှုကိုလောင်းကစားခြင်း
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် Arduino Primo အသစ်သည်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာသည်။ ၎င်းသည်တီထွင်သူများသည်ဆက်သွယ်မှုကိုအခြေခံအဖြစ်လောင်းနိုင်သည်။
Arduino IDE ကို Raspberry Pi နှင့်အခြားအသေးစားကွန်ပျူတာများအတွက်ရရှိနိုင်သည်
Arduino IDE သည် ARM ပလက်ဖောင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Raspberry Pi ကဲ့သို့သော SBC board များတွင်အသုံးပြုသောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
Udoo၊ တကယ့် All-In-One ဘုတ်အဖွဲ့
Udoo X86 သည် sbc board တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Arduino နှင့်လိုက်ဖက်သောအရာများအပြင် Raspberry Pi3နှင့် Arduino တို့နှင့်ပါဝါပိုရှိသည်။
သင်၏ Arduino ဘုတ်နှင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသေချာမသိ? Arduino Project Hub သည်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်
Arduino Project Hub သည်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု Arduino သိုလှောင်ရာနေရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်စီမံကိန်းများအပြင်သင် Arduino ဘုတ်များကိုအသုံးပြုရန်လည်းသင်ယူနိုင်သည်။
ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းတွင်ရှိသော Arduino နှင့် Raspberry Pi တို့တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
ကျွန်တော်တို့ RandA ရဲ့ထူးခြားချက်တွေအကြောင်းပြောကြမယ့် Entry၊ Arduino နဲ့ Raspberry Pi ကိုပေါင်းစပ်ဖို့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းပါ။
Trojan 77, Arduino နဲ့ဗိုင်းရပ်စ် Simulator ကို
Trojan 77 ဆိုတာဘာလဲ Arduino UNO အဲ့ဒါက Trojan တွေဆိုတာဘာလဲ၊ သူတို့က operating system မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသင်နားလည်စေတယ်။
Bonsai Watchdog, Aronsino နှင့်အတူစီမံကိန်း
Bonsai Watchdog သည်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် Arduino UNO ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ bonsai ၏စိုထိုင်းဆသို့မဟုတ် ၄ င်း၏တောက်ပမှုစသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိရန်နှင့်သိရန်ခွင့်ပြုသည်။
Arduino Tian သည် Raspberry Pi အတွက်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး လော။
Arduino Tian သည် IoT အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Raspberry Pi နှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့် Wifi ဆက်သွယ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်သော Arduino မှ SBC ဘုတ်အဖွဲ့အသစ်ဖြစ်သည်။
Farmbot သည်စိုက်ပျိုးရေးကိုပိုမိုလက်တွေ့ကျပြီးထိရောက်စေရန်အတွက် Arduino နှင့်အခြားပျဉ်ပြားများကိုအသုံးပြုသော Free Hardware Project ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောစာရွက်စာတမ်းများလည်းပါရှိသည်
Temboo သည် Arduino အတွက် multi-device ကိုတင်ထားသည်
Temboo သည် Arduino ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်တစ်ခုတည်းတွင်စီမံကိန်းများဖန်တီးရန်အတွက်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုစုဆောင်းပေးသောကိရိယာမျိုးစုံကိုဖန်တီးလိုက်သည်။
MKR1000, IoT အတွက် Arduino ဘုတ်အသစ်တစ်ခု
MKR1000 သည် Arduino စီမံကိန်းမှဘုတ်အဖွဲ့အသစ်ဖြစ်ပြီးလာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Microsoft နှင့် Arduino တို့၏ hackathon တွင်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
Crete Institute of Technological Education မှ Arduino ဘုတ်အဖွဲ့၏ကျေးဇူးကြောင့်ရွေ့လျားနိုင်သည့်ရေအောက်စက်ရုပ်ကိုတီထွင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဤထူးခြားသည့်စီမံကိန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်ပေးခဲ့သည်။
Arduino ဖြင့် Steampunk နာရီကိုဖန်တီးပါ
Jose Daniel Herrera သည် arduino ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော steampunk နာရီတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး Electronica chromatic scale - အခြေခံများကိုအသုံးပြုသည့်မူလစီမံကိန်းကိုအသုံးပြုသည်။
Arduino Create ကိုယခု beta ပုံစံဖြင့်ရနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် Arduino စီမံကိန်းအတွက်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုကိုသာတောင်းဆိုရမည်။ ဖိတ်ကြားမှု ၁၀၀ သာရှိသည်
သင်၏ကိုယ်ပိုင် 3D ပုံနှိပ်ရေဒီယိုထိန်းချုပ်ထားသော Jeep off-road ကိုဖန်တီးပါ
ဒီစီမံကိန်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်ရေဒီယိုထိန်းချုပ်ထားသောလမ်းဘေး Jeep ကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးသင်၏ 3D ပရင်တာဖြင့်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ သင့်စမတ်ဖုန်းမှသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သောကစားစရာတစ်ခု
ဂရိနိုင်ငံရှိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှရေအောက်စက်ရုပ်၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုစက်ရုပ်၏ ဦး နှောက်နှင့်အယပ်များကိုအသုံးပြုရန်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့် Arduino Mega ကိုအသုံးပြုသောစက်ရုပ်ပုံစံကိုစတင်ခဲ့သည်။
BQ ZUM Core၊ Arduino အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
BQ ZUM Core၊ စပိန်ဘာသာမှဆင်းသက်လာသောစပိန်အမှတ်တံဆိပ် BQ မှရိုးရာကိုအစားထိုးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် Arduino UNO.
Arduino 101, Arduino Intel နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ
Arduino 101 သည် Arduino board အသစ်ဖြစ်ပြီး Intel microcontroller ပါ ၀ င်ပြီး Arduino 101 ပရောဂျက်များကိုပိုမိုအားကောင်းစေမည့်မဟာမိတ်သစ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
ArdBir ကိုဖွင့်ပါ။ Arduino နဲ့ဘီယာဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
Open ArdBir သည်အခမဲ့စက်ပစ္စည်းစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး Arduino ဘုတ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ဘီယာထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်သည်။
Industruino, စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် Arduino ဘုတ်အဖွဲ့
Industruino သည်ပြုပြင်ထားသော Arduino ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးစက်မှုနှင့်စက်မှုဒီဇိုင်းများတွင်ရှေ့ပြေးပုံစံမပါဘဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ စျေးကအရမ်းမြင့်တယ်
သင်၏ပြောင်းလဲရန်ရိုးရှင်းသောဒိုင်းလွှားကို Arduino Uno တစ် ဦး Makeblock ပန်းကန်ပေါ်မှာ
ရိုးရှင်းပြီးအသုံး ၀ င်သောဒိုင်းလွှားသည်သင်၏ရောင်းဝယ်မှုကိုလက်တွေ့ကျသောနည်းဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည် Arduino Uno တစ် ဦး Makeblock ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်မှာ။
သူတို့က Prusa နဲ့ Arduino ဘုတ်တွေနဲ့ပင့်ကူစက်ရုပ်ကိုဖန်တီးတယ်
အသုံးပြုသူ RegisHsu သည် spider robot ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၎င်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး Arduino Pro Mini board ကိုအသုံးပြုသည်။
သင်၏အိမ်စမတ်နာရီကို Arduino Mini ဖြင့်ဖန်တီးပါ
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် Arduino Mini Pro ဘုတ်မှစမတ်နာရီတစ်လုံးနှင့် GY-87 ဟုခေါ်သောအာရုံခံဘုတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးကာ gadget နှင့်လိုက်ဖက်သောစမတ်နာရီကိုဖန်တီးသည်။
Arduino Micro ကိုအခြေခံပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင် DIY နှိုးစက်ကိုဖန်တီးပါ
ချဒ်ဟားဘတ်က Arduino Micro ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်စွမ်းအားများကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် DIY နှိုးစက်ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်များကိုပြသည်
ZelosLaser သည်အလွန်လူကြိုက်များသော professional cutter ဖြစ်ပြီးဖြတ်ထုတ်ရုံသာမကလူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သောအခမဲ့ hardware နှင့်ထွင်းထုသည့်ထွင်းထုခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
NASA သည် Arduino နှင့်အလုပ်လုပ်နေပုံရပြီးအာကာသတွင်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်သူတို့၏စီမံကိန်းများကိုဖွံ့ဖြိုးရန် Arduino Mega ပျဉ်ပြားများကိုယူနေသည်ဟုထင်ရသည်။
သင်၏ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဒီ Arduino လက်ဗွေရှာဖွေစက်ဖြင့်ဖွင့်ပါ
မည်သည့်တံခါးကိုဖွင့်ရန်သင့် arduino တက်ဘလက်နှင့်လက်ဗွေရှာဖွေစက်ကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည့်စွဲမှတ်ဖွယ်စီမံကိန်း
သူတို့က Doctor Who လိုမျိုးအသံချည်စက်ကိုဖန်တီးတယ်
ဆရာဝန်၏ပရိသတ်များပျော်ရွှင်စေရန် Arduino gemma နှင့် LEDs အချို့နှင့်အတူ Sonic ဝက်အူလှည့ပုံပြုလုပ်နည်းကိုဖန်တီးပြီးထုတ်ဝေသော Doctor Who ၏ပရိသတ်တစ် ဦး ။
Arduino စတူဒီယို၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Arduino ဘုတ်များအတွက် software အသစ်
Arduino စတူဒီယိုသည် Arduino.org စီမံကိန်းမှ software အသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Arduino IDE အဟောင်းကိုအစားထိုးရန်ရည်ရွယ်ပြီး Arduino ဘုတ်အဖွဲ့အားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။
Gilbert300, ပုံနှိပ်တဲ့ hexapod စက်ရုပ်
Gilbert300 သည်ပင့်ကူစက်ရုပ်ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ပုံနှိပ်ထားသောအပိုင်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ စက်ရုပ်သည်မည်သည့်ကြမ်းပြင်တွင်မဆိုအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည်။
Arduino Gemma ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝတ်ဆင်မှုကိုဖန်တီးပါ
Becky Stern ကကျွန်တော်တို့ကို Arduino Gemma ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့အားပေးတယ်
ဆူနာမီ၊ Arduino ၏နောက်ဆုံးမဟာမိတ်
Tsunami သည် Arduino နှင့်လိုက်ဖက်သောအခမဲ့ hardware board ဖြစ်ပြီးအခြား board များနှင့် analog signal ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ကူညီသည်။
Arduino Gemma, အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အစ
Arduino Gemma သည် Arduino နှင့် Adafruit ကုမ္ပဏီများအကြားဖန်တီးထားသောအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအရွယ်အစားသည် ၃ စင်တီမီတာထက်ငယ်သည်။ တစ်ပြားမှနည်းနည်းမျှသာရှိသည်။
Arduino IDE ၁.၆.၄၊ IDE ၏စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု
Arduino ပရောဂျက်သည်၎င်း၏ IDE ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်သော Arduino IDE ၁.၆.၄ ။ IDE သို့တရား ၀ င်မဟုတ်သော hardware များထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းပါဝင်သော IDE ဖြစ်သည်။
UnoProLogic2, Arduino အခြေစိုက် oscilloscope သည် ၂၂ ယူရိုအတွက်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်
Kickstarter ကိုရန်ပုံငွေရှာဖွေတဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Arduino ကိုအခြေခံထားတဲ့ oscilloscope, UnoProLogic2 ရဲ့တည်ရှိမှုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်
PLEN2 သည်ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများနှင့် arduino ကဲ့သို့သောအခမဲ့ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောလုံးဝအခမဲ့စက်ရုပ်ဖြစ်သည်။
သင်၏ရိုးရှင်းသောလျှောက်လွှာနှင့်စမတ်ဖုန်းမှ Arduino ကဒ်များကြောင့်သင့်အိမ်ရှိမည်သည့်အခန်းတွင်မဆိုအလင်းကိုထိန်းချုပ်ပါ
Arduino Zero Pro သည် Arduino စီမံကိန်း၏ဘုတ်အဖွဲ့အသစ်ဖြစ်သည်
SrL ကုမ္ပဏီ arduino ပရောဂျက်သည် 32-bit application များအတွက် debugger ပါ ၀ င်သည့်ပိုမိုအားကောင်းသော board တစ်ခုဖြစ်သည့် Arduino Zero Pro ဟုခေါ်သည့်ဘုတ်အဖွဲ့အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Visuino, ဟာ့ဒ်ဝဲဖန်တီးသူများအတွက်ပရိုဂရမ် tool တစ်ခု
Visuino သည် Arduino အတွက်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုဒ်အသစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖန်တီးရန်အတွက်ကုဒ်ကိုလျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်သည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားလုံး Arduino ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ
တွစ်တာပို့ရန် Arduino ကိုသုံးပါ
Arduino သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တွစ်တာတွင်တွစ်များကိုထုတ်ဝေခြင်း၊ တိကျသောဆော့ဝဲလ်မလိုအပ်ဘဲလုပ်ရန်လွယ်ကူသောအလုပ်များ၊ အလုပ်များစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သည်။
Arduino Controller ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လက်အိတ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အတုကိုရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတာပြတဲ့ဗီဒီယို။
OpenWheels, Segway ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အိမ်လုပ်
OpenWheels သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးအများပြည်သူသုံးလမ်းများတွင် အသုံးပြု၍ မရပါ။
သူတို့က Arduino ဘုတ်အဖွဲ့ကိုပိုကွန်းမင်အရာတစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်တယ်
Pokémonကို Arduino ဘုတ်တွင်သိမ်းဆည်းရန်ဟက်ကာတစ် ဦး ကအစီအစဉ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
BUM မှ ZUM SCAN ကို Creative Commons လိုင်စင်ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Bq သည်မကြာသေးမီက ZUM SCAN ဘုတ်အဖွဲ့မှစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး Ciclop scanner ၏တည်ဆောက်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
LibreCalc သည်ပြင်သစ်မူရင်းအခမဲ့ဂဏန်းတွက်စက်ဖြစ်ပြီး၊ မည်သူမဆိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သောသိပ္ပံနည်းကျ၊ အခမဲ့နှင့်စျေးသိပ်မကြီးသောဂဏန်းတွက်စက်ကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်။
MeArm သည်စုစုပေါင်းရန်ပုံငွေရှာခြင်းစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်ရုပ်လက်မောင်းကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏အသေးငယ်ဆုံးသို့ယူဆောင်လာပြီးမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုလေ့လာရန်ကြိုးစားသည်။
MEG ဆိုသည်မှာစမတ်ဖုန်း မှနေ၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် microclimate ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဖန်လုံအိမ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန် Arduino boards ကိုအသုံးပြုသည်။